ငါးခြောက်လုပ်ငန်းများ ကုန်ကြမ်းပြတ်သဖြင့် လုပ်သားများ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေရ - Yangon Media Group
ငါးခြောက်လုပ်ငန်းများ ကုန်ကြမ်းပြတ်သဖြင့် လုပ်သားများ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေရ
ပင်လယ် ငါးကုန်တက်ကိုအမှီပြုလုပ်ကိုင် လျက်ရှိသော ငါးခြောက်လုပ်ငန်းများ ငါးမဖမ်းရကာလကြောင့် ငါးကုန်ကြမ်းပြတ်လပ်ကာ အလုပ်သမားများ အလုပ်လက်မဲ့မှုများ ဖြင့် ကြုံတွေ့နေရကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံငါးပိ၊ ငါးခြောက်၊ ငံပြာရည် ထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်သူများအသင်း မှ သိရသည်။
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနသည် မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင် ငါးသယံဇာတများကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်ပင် လယ်ပြင်ငါးမဖမ်းရကာလကို ယခု နှစ်တွင် ဇွန် ၁ရက်မှ သြဂုတ် ကုန် အထိ သုံးလသတ်မှတ်ပိတ်ပင်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းပိတ်ပင်မှုကြောင့် ပင်လယ်ငါးကုန်တက်ကို အမှီပြု လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော ငါးခြောက် လုပ်ငန်းများ ကုန်ကြမ်းရှားပါးပြတ် လပ်ကာ အလုပ်သမားများအလုပ် လက်မဲ့မှုများဖြင့် ကြုံတွေ့နေရ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံငါးပိ၊ ငါးခြောက်၊ ငံပြာရည်ထုတ်လုပ် ရောင်းဝယ်သူ များအသင်းမှ အထွေထွေအတွင်း ရေးမှူးဦးထွန်းစိန်က ”လက်ရှိငါး မဖမ်းရရာသီအဖြစ် ပိတ်ထားတဲ့ အတွက်ကြောင့် ကုန်ကြမ်းရှားပါး ပြတ်လပ်တဲ့အနေအထားနဲ့ ငါး ခြောက်လုပ်ငန်း ငါးခြောက်ရုံတွေ မှာ ငါးမရှိပါဘူး။ ငါးခုတ်တဲ့အလုပ် သမားတွေမှာလည်း ခုတ်စရာငါး မရှိဘူး။ မနှစ်တုန်းက ငါးမဖမ်းရ ရာသီသုံးလပိတ်တယ်။ကမ်းဝေး ငါးဖမ်းလှေ ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းကို ငါး ဖမ်းခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် ရှင် သန်လို့ရသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီနှစ် မှာ လုံးဝသုညရာခိုင်နှုန်းလုံးဝပိတ် လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် တော်တော် အခက်အခဲဖြစ်နေကြ ပါ တယ်။ လုပ်ငန်းရှင်တွေမှာကထိ ခိုက်မှုသိပ့်မရှိဘူး။ အလုပ်သမား တွေ ဝန်ထမ်းတွေသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေရဲ့ ပညာရေးကအစ ခက်ခဲ တွေ့နေပါတယ်။ ကုန်ဈေးနှုန်းက တက်လာတဲ့အနေအထားမှာ ဝင် ငွေက မရှိဘူးဆိုတော့ သူတို့ခက်ခဲ လွန်းပါတယ်”ဟု ဇူလိုင် ၁ဝ ရက် ကပြောသည်။
ယင်းသို့အလုပ်သမားများ၏စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့နေရသည့်အပေါ် လာ မည့်နှစ်များတွင် လုပ်ငန်းများအ လုံးစုံရပ်ဆိုင်းမသွားစေရန် ငါးမ ဖမ်းရကာလကို သုံးလသတ်မှတ် ခြင်းအစား နှစ်လပြောင်းလဲသတ် မှတ်ပေးရန် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန သို့ တင်ပြတောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဦးထွန်းစိန်က”အခုငါးဖမ်း ရာသီပိတ်ထားတာတစ်လကျော် လေးပဲရှိသေးတယ်။ ဖြတ်သန်းဖို့က နှစ်လနီးပါးလောက်ကျန်သေး တယ်။ ဒီလိုအချိန်လေးမှာတောင် ဒီလိုအနေအထားဖြစ်နေတာ ကြောင့် အဓိကအကြောင်းရင်း ဖြစ်တဲ့ ငါးမဖမ်းရကာလသုံးလ ပိတ်ထားကို လာမယ့်နှစ်တွေမှာ နှစ်လလောက်ပဲပိတ်ဖို့တောင်းဆို ချင်ပါတယ်။ ငါးခြောက်လုပ်ငန်း က အလုပ်သမားတွေတင်မက အ အေးခန်းအလုပ်သမားတွေ ရေ လုပ်သားတွေဂျက် တီတွေကအ လုပ်သမားတွေ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းအ ပေါ်မှီခိုနေရတဲ့ အလုပ်သမားတွေ တော်တော်အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ အတွက်ကြောင့် နောင်နှစ်နောင် နှစ်တွေမှာ သုံးလအစားနှစ်လပဲ ပိတ်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုတာပါ”ဟုပြောသည်။
ငါးခြောက်ရှားပါးမှုကြောင့် ယခင် ကျပ် ၆ဝဝဝ တန်ငါးခြောက်မှာ ယခု ကျပ် ၈ဝဝဝ၊ ယခင် ၁၃ဝဝဝ ကျပ်တန်ငါးတန် ငါးခြောက်မှာ ယခု ကျပ် ၁၆ဝဝဝ သို့ ငါးခြောက် ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာခဲ့သော် လည်း ငါးပိ၊ ငံပြာရည်မှာ ထုတ် လုပ်မှုကို ထိခိုက်မှုမရှိခြင်းကြောင့် ဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုလည်း မရှိ ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှ အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာတိုးနန္ဒာတင်က”နှစ်လပိတ်မယ်။ သုံးလပိတ်မယ်ဆိုတာ ကိုယ့်တိုင်းပြည်အပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာ သုံးလပိတ်လိုက်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ဘာကောင်းကျိုး တွေဖြစ်လာလဲဆိုတာ ကြည့်ရမယ်။ သုံးလပိတ်လိုက်လို့ ကောင်း ကျိုး အများကြီးဖြစ်တယ်ဆိုရင် သုံးလပိတ်သင့်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အရမ်း ကြီးမထူးရင်တော့ ပြန်စဉ်းစားသုံးသပ်ရမယ်။ ငါးသားပေါက်ရာသီနဲ့ ပတ်သက်ပြီးပိတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် သုတေသနလုပ်ပြီး ဆောင်ရွက်ရပါမယ်”ဟု ပြောသည်။
ချင်းတွင်းမြစ်ရေ တိုးလာချိန် ရေယာဉ်များ သတိပြုသွားလာရန် သဘာဝဘေးကာကွယ်ရေး သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်
မိုးရက်ဆက် ရွာသွန်းနေမှုကြောင့် ခန္တီးနှင့် ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်များရှိ အနိမ့်ပိုင်းကျေးရွာအချို့သို့ရေဝင်ရောက်၊ ကြိုတင် သတိပေးစောင့်ကြည့်ခြင်းများဆောင်ရွက်နေ
နေပြည်တော်တွင် မြန်မာ-ဂျပန်ချစ်ကြည်ရေး အထိမ်းအမှတ် ဒုတိယအကြိမ် ချယ်ရီပန်းပင် ၂ဝဝ စိုက်ပျိ??
နွားဦးတိုက် ဆရာတော်၏ လေးထပ်ကျောင်းဆောင် ရေစက်ချပွဲနှင့် အလှူတော်မင်္ဂလာပွဲ ကျင်းပမည်
သေဒဏ်ကျခံနေရသည့် ခေါင်းဖြတ်လူသတ်မှု ကျူးလွန်ခဲ့သူကို လွှတ်ပေးခြင်းမရှိ၊ ထောင်ထဲတွင်ပင် ရှိ
ချီးမြှင့် အဆောင်အယောင်များနှင့် ဆုကြေးပြန်လည် အပ်နှံရန်နှင့် National Director ဒေါ်စိုးယုဝေအား တောင??
ဒိုင်ယာနာ မင်းသမီး ကွယ်လွန်မှု အနှစ် ၂ဝ ပြည့် အမှတ်တရ ရုပ်တု ထုလုပ်မည်